TSY FANJARIAN-TSAKAFO : Fananganana vovonana no hitan’ny sasany fa vahaolana
Natsangana teto Boeny nandritry ny telo andro ny vovonana hisahanana ny tsy fanjariantsakafo. 23 août 2019
Ratsamangaika eto Boeny izy ity ka fikambanana miisa 30 no nantsoina handray anjara. Voalaza mantsy fa 44,7% ny vahoaka malagasy no tratran’ny ny tsy fanjarian-tsakafo. Efa nisy ny vahaolana entin’ny ONN hiadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo dia ny fametrahana ireny toby isaky ny fokontany ireny. Ny secaline no nanomboka azy ary notohizan’ny ONN tato aoriana. Misy mpanentana sy mpitsabo ao mifanerasera amin’ireo vahoaka ifotony, mampahafantatra ny olona momba ny sakafo ara-pahasalamana ary manome sakafo ireo zaza tena voa mafy amin’izany tsy fanjariantsakafo izany.
Misy koa karazana sakafo omena ny zaza rehetra izay tonga eny. Misy fanaraha-maso manokana koa ho an’ireo zaza tena tsy ampy lanja sy mitondra aretina noho ny tsy fanjarian-tsakafo. Nandalo fotoantsarotra izy ireny toby ireny taorian’ny taona 2009 satria nijanona ny famatsiam-bola azy ireny ka nijanona toy izany koa ny fanomezana sakafo sy fanarahamaso ny zaza eny ifotony. Nisy ny tombanezaka sy ny fijerena ny olana taona vitsivitsy izay izay niantsoana ny mpanao gazety teto Mahajanga. Nisy ny fidinana ifotony sy fitsidihana ireny toby ireny ary samy nahita fa tena ilaina ny iverenan’ireny toby secaline manara-maso ny zaza ireny satria raha ny eto Mahajanga ohatra dia ny teny Sotema sisa nisokatra ary mpiasa antsitrapo japoney no mbola nanohana azy ireo .
Efa nihidy kosa ny teny Mahavoky sy ny Tsaramandroso ary tamin’ny fokontany maro. Ankehitriny kosa dia fananganana vovonana hisahana ny tsy fanjarian-tsakafo no hitan’ny tompon’andraikitra ho vahaolana hiadiana amin’ny tsy fanjariantsakafo. Hadinon’izy ireo ve fa ny tsy fahampiana no tena mahatonga ny tsy fahampiantsakafo voalohany ? Betsaka amin’ny Malagasy no miaina amin’ny vola ambanin’ny 1 dolara isanandro. Zara raha mahita vary hohanina ny fianakaviana sasany ka tsy misy na zara fa misy ny laoka. Marina fa misy ny atao hoe sakafo maro loko ka zavatra tsotsotra dia afaka mifameno hahazoana ilay sakafo ara-pahasalamana. Misy peta-drindrina mampahafanttra izany eny amin’ny toby mpanara-maso isam-pokontany nireny, ary mampahafantatra izany ihany koa ireo mpanentana.
Manana mpanentana mahay sy efa za-draharaha ary efa voaporofo ny asa vitany tamin’io sehatra io i Mahajanga. Misy amin’izy ireo ny nanohy hatrany ny asany na tsy nandray karama intsony aza, ary nitady fomba hafa entina hanampiana ireo ray aman-dreny amin’ny fanomezana sakafo ara-pahasalamana ny zanany. Tamin’izany dia voalaza ombieny ombieny fa ilaina ny famatsiam-bola indray ny toby ahafahana misahana avy hatrany ireo zaza. Mahagaga anefa fa mbola fiivorivoriana’ ihany no andaniana ny vola izay tokony efa nanavotra zaza maro amin’ny tsy fanjarioan-tsakafo. Misy ny tambazotra efa miorina sy voaporofo fa mahavita azy nefa dia mbola mamorona sehatra hafa izay tsy hiasa mivantana amin’izany akory.
Efa an-dohalika ny ranombary matoa ny 44,7% ny malagasy no efa tratran’ny tsy fanjariantsakafo. tsy vovonana sy mpiasa birao ary kivorivory intsony no ilaina fa asa avy hatrany izay mipaka avy hatrany amin’ireo olona tratran’izany. Dia ny fanatsarana ny fari-piainan’ny fianakaviana tsirairay, ny fanaraha maso ireo zaza tena tsy ampy lanja, ary ny fanomezana sakafo ampy sy sahaza azy ireo hampihena haingana ny vokatry ny tsy fahampian-tsakafo aminy. Fotoana hiasana izao ary tokony hisy vokatra avy hatrany ny asa atao, indrindra fa vahoaka sy aim-bahoaka no resaka. Misy ny asa efa natao taloha nahitam-bokany ka tokony hotohizana fa vtsy ho lany andro hamorona zava-baovao sy rafitra vaovao, handany vola fotsiny, vola izay efa afakan ampiasaina avy hatrany amin’ireo tratry ny tsy fahampiana ara-tsakafo.